I-Kaipara Coast Retreat - indawo yokubalekela yezwe lakini
Glorit, Auckland, i-New Zealand
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Delcia And John
I-Kaipara Coast Retreat izungezwe indawo yasemaphandleni kanye ne-peep ye-Kaipara Harbour. Khumula, thatha unyawo wehla ngomgwaqo wasepulazini noma uphumule emphemeni ngesiphuzo ukuze ubuke ukushona kwethu kwelanga okuhle. Okanye zigoqe futhi ubukele imuvi ku-Netflix noma umdlalo owuthandayo ku-Sky sport.
Indawo enhle yokuphumula lapho uya endaweni oya kuyo elandelayo noma udinga ukuphumula. Ihora elilodwa ukusuka e-Auckland kumzila we-scenic wogu olusentshonalanga (SH16), 18mins enyakatho ye-Kaukapakapa noma 22mins eningizimu ye-Wellsford.
I-Kaipara Coast Retreat iyindawo enelanga nefudumele ukuze uphumule futhi uphole. Inegumbi lokuphumula elivulekile eline-smart tv, indawo yokudlela nekhishi elihlome ngokuphelele elihlanganisa ifriji/ifriji nomshini wekhofi weNepresso.
Ziphuphe usekamelweni elihlukile unombhede otofontofo kasayizi wendlovukazi noma snebe phansi futhi ubukele i-Netflix ngaphambi kokugcwala ubuthongo.
Igumbi lokugezela linendawo yokugeza enkulu. Indawo yokuwasha ehlukene inomshini wokuwasha nokomisa.
Ukugeleza kwangaphakathi nangaphandle kuya endaweni evikelekile lapho ungajabulela khona ukubukwa nokushona kwelanga. Idekhi iholela engadini encane, ebiyelwe enhle kakhulu uma ungathanda ukuletha umngane wakho onemilenze emine kanye nawe. Indawo yokupaka engaphansi kwekhava yemoto yakho kanye nendawo eningi yokupaka isikebhe sakho, ikharavani noma ukuntanta kweHhashi. Kukhona ama-paddocks amahhashi akho ngokuhlelwa.
Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-5 ubudala zamukelekile ukuza nomama kanye/noma nobaba. Nokho-ke i-KCR ngokuyinhloko iyindawo yabashadikazi ababalekela kuyo ngakho-ke asizibhekeli izingane.
Jabulela ukuhambahamba kalula phakathi nokuhwalala noma ukuntwela kokusa, eduze komgwaqo wendawo wasepulazini ukuze ujabulele izilwane zasemaphandleni nomoya omusha wezwe. I-Kaipara Country Retreat uma indawo ekahle yokuhlala uma uvakashele iqoqo le-Gibbs Farm Sculpture, ufuna ukugibela intaba i-Auckland noma ukudoba noma ukuhamba nge-kayaking phansi komfula i-Hoteo ukuya echwebeni laseKaipara.
IGibbs Farm iyindlela esheshayo eyi-9 min ukushayela (9.5km). I-Gibbs Farm iyilungiselelo elingajwayelekile leqoqo elimangalisayo lezithombe eziqoshiwe. Uma uvela eningizimu awukwazi ukuphuthelwa imisebenzi yobuciko emide egqumeni njengoba uzungeza ekhoneni. Bawumbukwane omangalisayo.
I-Hoteo river iyindawo eyaziwa kakhulu kubantu bendawo yokwethula isikebhe sakho ukuze ufike echwebeni laseKaipara ukuze uthole indawo yokudoba. Ungase ulethe ama-kayak akho lapha ukuze uthole i-paddle ethandekayo emfuleni. Ungakhohlwa ivesti yakho yokuphila.
Indawo yokungena ye-Mount Auckland (Atuanui) Walkway ingaphesheya komgwaqo ukusuka e-Kaipara Country Retreat uma uthanda ukuhamba ngezinyawo. Le threkhi yokunyathela ethuthukisiwe ingu-3.5km ukuya esiqongweni seMount Auckland, cishe ihora elingu-1 nemizuzu engu-45 ukuya nje. Azikho izinja ezivunyelwe kule ngoma.
I-Omeru Falls Scenic Reserve ingama-12km emuva ngaseKaukapakapa kanye nomfula iMakarau. Ithrekhi ebuyayo yokuhamba eyimizuzu eyi-10 ihola ukusuka endaweni yokupaka izimoto ukuya ezizimpophomeni. Kukhona indawo yokubhukuda esezingeni eliphezulu phansi kwempophoma. Izinja ezinezintambo zingakujoyina futhi zicwiliswe emgodini wokunisela. Kukhona ezinye izimpophoma ezimbili esincoma kakhulu ukuthi uzivakashele - i-Waitangi Stream Cascade, ozoyibona endleleni eya e-Omeru Falls; kanye ne-Waitangi Falls edinga imizuzu engu-20 yohambo oluqhubekayo.
Ibungazwe ngu-Delcia And John
Mina noJohn sibheke ngabomvu ukuhlangana nawe lapho ufika. Siyakuqonda ukubaluleka kokuhlonipha ubumfihlo bakho ngaso sonke isikhathi kodwa sijabule kakhulu ukukusiza nganoma iyiphi indlela esingakwenza ngayo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Glorit namaphethelo